] Kurlon angelica | Rayson
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa kacha mma 10Inch White ebe nchekwa ụfụfụ matraasi soplaya
Ngwaahịa a bụ nke ukwuu mgbochi nje. Ihe ndị dị na ya nke na-egosipụta ihe na-eme ka mmiri na-ekpo ọkụ nwere ike inye aka n'ụzọ dị irè igbochi uto nke ụmụ nje na-esi ísì n'ụkwụ.
Rayson Global Co., Ltd bụ njikọ aka nke Sino-US, hiwere na 2007 nke dị na Shishan Town, Foshan High-Tech Mpaghara, yana ọ dị nso na ụlọ ọrụ ama ama dị ka V.
Ka ọ dị ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa ogo mba ụwa. A na-eweta ngwaahịa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị nwere nhazi ọhụụ, ịdịmma ekwenyere na ọnụ ahịa asọmpi. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, anyị eguzobewo mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa anyị n'ụwa nile. Biko jide n'aka na anyị nwere ikike mbupụ ngwaahịa anyị na a gaghị enwe mmebi n'ime ngwaahịa ebupụtara. Anyị na-anabata ajụjụ gị na ịkpọ gị nke ọma. Site na ahịrị mmepụta zuru oke yana ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike chepụta, mepụta, rụpụta ma nwalee ngwaahịa niile n'ụzọ dị mma. N'ime usoro dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-ahụ maka usoro ọ bụla iji hụ na ngwaahịa dị mma. Ọzọkwa, nnyefe anyị na-abịa n'oge ma nwee ike gboo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na a na-ezigara ndị ahịa ngwaahịa ndị dị mma na mma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọrọ ịmatakwu gbasara anyị, kpọọ anyị ozugbo. Kemgbe emebere ya, Rayson na-achọ ịnye ndị ahịa anyị ihe ngwọta pụtara ìhè ma dị egwu. Anyị ehiwela R nke anyị&D center maka imepụta ngwaahịa na mmepe ngwaahịa. Anyị na-agbaso usoro njikwa mma ọkọlọtọ iji hụ na ngwaahịa anyị zutere ma ọ bụ gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ mgbe-ahịa maka ndị ahịa n'ụwa niile. Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị naanị.
Kedu ụzọ ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na TT, 30% Deposi na 70% itule megidere akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ witinin 7 ụbọchị ọrụ. Olee otú ịtọghe a akpọrepu matraasi? 1. Tinye katọn n'elu ala dị larịị n'ime ime ụlọ gị, jiri nlezianya dọpụta matraasi ma tinye n'elu akwa gị. 2.Crefully bee ná mpụta akpa na mkpa na-eme ka n'aka na ọ bụghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ matraasi, adịghị akpọ a mma. 3.Roll out the vacuum-sealed mattress on your bed 4.Crefully be the plastic bag along watch ka matraasi ozugbo amalite decompress,Wepu plastic akpa. 5.Allow 24 awa maka matraasi ọhụrụ gị ka ọ gbasaa kpamkpam. Enwere m ike ịga na ụlọ ọrụ gị? Ee, nabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iburu gị.
Na-agba mbọ mgbe niile ka ọ dị mma, Rayson azụlitela ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịkwalite ike nke nyocha sayensị na imecha azụmahịa ọrụ. Anyị eguzobela ngalaba ọrụ ndị ahịa iji nye ndị ahịa ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nleba anya. kurlon Angelica Rayson bụ onye nrụpụta zuru oke na onye na-ebubata ngwaahịa dị elu yana ọrụ nkwụsị. Anyị ga-, dị ka mgbe niile, na-arụsi ọrụ ike na-enye ngwa ngwa ọrụ dị otú ahụ. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara kurlon angelica na ngwaahịa ndị ọzọ, dị nnọọ ka anyị mara.Rayson undergoes a usoro nke àgwà ule. Ha na-agụnye nlele ihe nleba anya nke akwa, ịdị mma agba, nlele nrapado (logos, mkpado, akara nlekọta), nlele mmebi nkenke, wdg.